ကဗျာ ၂ပုဒ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » ကဗျာ ၂ပုဒ်
Posted by kai on Feb 23, 2013 in Poetry | 19 comments
တ ချို့ က စ ပျ စ် သီးဖြ စ် တ ယ် ၊ တ ချို့ က စ န်းစ န်းတ င့် ဖြ စ် တ ယ်
တချို့ က စန်းစန်းတင့်ဖြစ်တယ်။
တချို့ က နောက်ပြန်လှည့်မှာစိုး
တချို့ က နောက်ပြန်မလှည့်မှာစိုး။
တချို့ က အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး
“ကျားကိုသတ်ရင်သတ်၊ မသတ်ရင် ကျားက ကိုယ့်ကိုသတ်မှာပဲ“
သူက စန်းစန်းတင့်ဖြစ်တယ်။ ။
ကုန်သည်လေ တိုက်ချိန် ကြ မှာ
ငါဒို့ ဟာ လက်ဗလာနဲ့ 
လယ်တွေကို ဒို့ မပိုင်ကြတော့ဘူးလေ ။
သူတို့ တံခါးတွေ ဖွင့်၊
ဒို့တခါးတွေကို ပိတ်လိုက်တာ။
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း၊
သူတို့ရဲ့ခနခန ပြောင်းလဲခြင်းတွေထဲမှာ
ပြောင်းလဲခွင့်မရသူတွေသာများလာရဲ့။
သူတို့ တခါးမဖွင့်ခင်အချိန် အထိ
ရေကန်မှာ ကြာရိုးကြာစွယ် တွေနဲ့လှနေတဲ့ ရွာဟာ ၊
ည မှာ လ။
လယ်တောနဲ့ တောင် ပဏာရ
ဘူတိုဇာတွေ ၀င်လာကထဲက ကတည်းက
ခွေးလျှက်ထားတဲ့ပုဂံလို ပြောင်သလင်းခါလို့ ၊
မြှစ်စို့ပေါက် အသွင်
ချစ်လို့ နမ်းနဲ့ 
မိုးနဲ့ သက်တန် လို
ဇရက်နဲ့လက်ပန်လို တပူး တွဲတွဲ … ။
လက်ပဒေါင်း တောင် သက်သေတည်ခဲ့ပြီ။
အို .. ကိုးမြို့ ရှင် ..
အချစ်တခုရဲ့မြစ်ဖျားခံရာ ဟာလဲ
ဟော့ဒီ … တွန့် ခေါက်တောင်တန်း ပါပဲ။
လူဟာ အောင်မြင်မှုထက် တန်ဖိုးရှိဖို့ကိုလိုလား
ဒါဟာဒို့ရွာရဲ့ထုံးထားပါပဲ။
တရွာလုံးက အပျိုမ တွေ ၊
မြစ်ဆိုတာ လူနဲ့ သတ္တ၀ါတွေကြား၊
ငါဒို့ ရွာသားများ ဟာ
အားလုံး အပေးယူ မျှ မျှ နေခဲ့ကြတယ် ။
တပုံကိုလျူ ခဲ့ကြရဲ့ ။
တောင်ကြီး တွေ ပြို သွားရင်
လည်ပင်းဖက်ကြီးလာကြရဲ့။
ကျူးကျော်သူတွေ လို့ သတ်မှတ်ခံလိုက်ရတယ်။
ပါးစပ်က ထန်းရေ နံ ထ တာကလွဲလို့ 
ငါဒို့ ဟာ ဥပဒေကိုမချိုးဖေါက်ခဲ့ကြပါဘူး။
ငါယောက်ဖ က တအံတသြနဲ့ 
‘’ ဒို့ မြေပဲခင်းတွေအားလုံး ကို နိင်ငံတော်က ပို်င်သတဲ့ကွ’’
ရွာတော့ အပမှီ ပြီဆိုတာသိလိုက်ကြတယ်။
ငါဒို့ ဟာလက်ဗလာနဲ့ 
လယ်တွေကို ဒို့ မပိုင်ကြတော့ဘူး။
ခေါစာပြစ်လို့ မရတဲ့ ခရိုနီတွေရယ်
ကျွတ်ကျွတ် အိပ်တွေ ရယ်ပါပဲ။
သူငယ်ချင်းကောင်းယောင်းမတို့ ရေ ၊
လယ်ကွင်းတွေထဲက တေးသံ လွင့်ပျံ ။
နာနာဘာဝမှန်သမျှ မောင်းထုတ်ကြတဲ့ပွဲ မှာ၊
ဒီဇင်ဘာ ၄၊၂၀၁၂ ။
ကိုဟန်ဝင်းအောင်၊ ကိုအောင်စိုး တို့ အတွက်။
ဒါပေမဲ့ မိုးသီးဇွန်ရေးတဲ့ကဗျာကို ပိုခံစားလို့ရတယ်…
သဂျီးရေ..နှစ်ပုဒ် စလုံး တစ်ပုဒ်ကို သုံးခေါက်စီ ဖတ်လိုက်တယ်….
တစ်ခါဖတ် တိုင်း နားလည်မှုနဲ့ ခံစားရမှု က တစ်ဆင့်ထပ်တိုးတယ်..ရင်ထဲပိုရောက်လာတယ်..
ပထမ ကဗျာက..ကျစ်တယ်..မာတယ်..တင်းတယ်.. တိုတယ်..ရင့်တယ်..ကျွပ်ဆပ်တယ်. .ဒေါပါတယ်.. ဖတ်ရတဲ့သူပါရောပြီး ဒေါပါလာအောင် ဆွဲခေါ် တယ်..စကားလုံး အသုံး နက်တယ်..
” ကြည့်စမ်း- အချောင်သမားတွေ
ဓားကို အရင်းကမကိုင်၊ အဖျားကကိုင်လို့ ။”
သူခိုး ဓါးရိုး ကမ်းတယ် ဆိုတာ ကို သုံးသွားတဲ့စကား.. ကိုယ်တွေဘယ်တော့မှ သုံးတတ် ရေးတတ်မှာ မဟုတ်ဘူး…
ဒုတိယ ကဗျာ..ရိုးတယ် ..စင်းတယ်. .ချောတယ်..ညွတ်တယ်.. အပျော့ဆွဲတယ်…တွဲ့တယ်.. ရွဲ့တယ်…ခနဲ့တယ်.. .စောင်းတယ်.မြောင်းတယ်. .ထေ့တယ်..ငေါ့တယ်.. တိုင်တည်တယ်..နှစ်သိမ့်တယ်
အရင် သာယာ အေးချမ်းပုံ နဲ့ ယခု ခြောက်ခမ်း ပူပန် ရပုံ နှစ်ခုကို ယှဉ်တွဲ ပြပြီး ဖတ်တဲ့သူ ရင်ကို.. လွမ်းသွားအောင်..နာသွားအောင် …ဆွေးသွားအောင်..မခံချိ မခံသာဖြစ်အောင်..လုပ်ပြီးမှ..ဒို့တွေ ..ဒီလိုဖြစ်နေကြပြီ..ဒီလိုခံနေရပြီ…
ဒါတွေဖြစ်နေတယ် ..ဒို့တွေငြိမ်မခံပဲ တွန်းလှန်ရအောင် ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တာ…
ရေးလဲရေးတတ်ကြပါ့ ..ထွက်လည်း ထွက်တဲ့ ဥာဏ်..ကွန့် လည်း ကွန့်တတ်ကြတဲ့ အတွေး..ဒါကြောင့်လည်းကဗျာ ဆရာ ဖြစ်နေကြတာ..
အိုက်ဒါ .. ဘာကြောဒါဒုံးဂျ … အဟီးးး
ဆရာအောင်ဝေး ကဗျာကို ပိုကြိုက်တယ် ….
အပေါ်က ဟာလေး မသိတာက လွဲလို့ပေါ့လို့ …
ကဗျာ နှစ်ပုဒ်လုံးကို လုံးစေ့ပတ်စေ့ မဟုတ်ပေမယ့် ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း ခံစားသွားပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆရာအောင်ဝေးကဗျာကို ပိုကြိုက်မိတယ်။
တစ်ချို့ က စားအုန်းဆီကို အင်ထုတယ်
တစ်ချို့ က ပဲဆီကို အင်ထုတယ်
မြန်မာ့အသဲတွေ ယောင်လာ ကျွတ်လာ နာလာတာ ကြာပေါ့
ဆီကိုရေချိုး ဆေးရိုးမီးလှုံ စပါးတောင်လိုပုံ
ငါ့ကြတော့ ရေးလိုက်ရတဲ့ ကဗျာတွေ၊ ဘယ်သူမှလည်း အရေးလုပ်ဝူး.. ခွီးထဲမှဗဲ… :eee:
ဘာမှတော့ အထွေအထူး ဝေဖန်မနေတော့ပါဘူ……
ဒီလူကြီးတွေ သုံးတဲ့ စကားလုံးအား အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ကို အောင်ဝေး ခေါင်းစဉ်ကို သဘောကျတယ်။
အနော်ကတော့ မရတဲ့ စပျစ်သီးမချဉ်ဘူး။
စန်းစန်းတင့်ဖြစ်ဖို့ကတော့ လူ ရွေးတယ်။
လွတ်တဲ့ငါးမကြီးရအောင် မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ဗုံးထောင်မယ်…
ဘယ်ငါးမှ မလွှတ်စေရ၀ူး.. :harr:
မယ် ဝါးရယ်။ ရက်စက်ပါ့။
ကျုပ်က အရှင်ကို ကြော်စားချင်လို့ရယ်။
မိုးသီးဇွန် ဆိုလို့ . . . . . လေယာဉ်ကွင်းမှာ ကားပေါ်တက် ပြီး ဟန်ပါပါ လက်ကားကား၊ ခြေကားကား နဲ့ ပုံ ကိုပဲပြေးပြေး မြင်တယ် .. .. .. ..။ သူ့ကို တရားစွဲ ထားတယ် လဲ ကြားတယ် . . .။ ဘာမှ တောင် ပြန်မဖြေရှင်း ပဲ .. ဟိုလူ လုပ်တာ လိုလို၊ ဒီလူ ခိုင်းတာလိုလို နဲ့ . . . . အဲ့ဒါ လေးကော ဘာကြား သလဲ သူကြီး ရဲ့ . . . .။
Celebrity ကို စပျစ်သီးလို့ သုံးတယ်ထင်နေတာ..
အခုခေတ်.. ထမင်းဝ..ခါးထွားနေကြတဲ့.. ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အထက်တွေ.. မိုးသီးဇွန်နဲ့.. ၈၈တွေကျေးဇူး.. တယ်မကင်းဘူးပဲ..
စပျစ်သီးတွေရော.. စန်းစန်းတင့်တွေရော.. ခရိုနီတွေရော.. ပေါ့လေ..
မရတဲ့ စပျစ် ချဉ်တတ်သူတွေကို ပြောသလားလို့။
စန်းစန်းတင့်ကတော့ ဆြာရီးဒွေကို ပြောဒါမလား.. :bar:
နာ ထင်တာတွေ လွဲပြန်ပလား။
နာ က စန်းစန်းတင့်ဆိုတာ Sensitive ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာလားလို့ မှတ်နေတာ။
နာ တို့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ အဲ့ဂလို သုံးလို့။
စပျစ်သီး = Celebrity
လေဒီကြီး = ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ပထမ ကဗျာက ကျနော်တို့နဲ့အတူနေခဲ့သူဆိုတော့ ခံစားမူ့ ပိုစစ် တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
အောက်က ကဗျာကတော့ ခါတော်မီ ပရိသတ်အကြိုက်လိုက်ရေးထားတဲ့ ခံစားမူ့အတုနဲ့ကဗျာလို့
သူတို့နဲ့အတူတွဲခဲ့တဲ့ ဆမားညီညီ သာ ဒုတိယကဗျာကိုဖတ်မိရင်